ila 6 qof oo isugu jira horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan Shabaab oo lagu dilay duqeyn xalay ka dhacday Shabeelada Hoose. – Radio Muqdisho
ila 6 qof oo isugu jira horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan Shabaab oo lagu dilay duqeyn xalay ka dhacday Shabeelada Hoose.
Wararka ka imaanaya gobolka Shabeelada Hoose ayaa sheegaya in duqeyn hor leh oo xagga circa ah xalay lagu bartilmaameedsaday horjoogayaal iyo maleeshi katirsan Alshabaab.
C/fataax Xaaji Cabdulle oo ah guddoomiye ku xigeenka Gobolka Shabeelada Hoose ayaa SONNA u xaqiijiyay sheegay in duqeyntaasi lagu dilay ilaa 6 qof oo katirsan Shabaab kuwaasi oo isugu jira horgoogayaal maleeshiyaad oo Alshabaab katirsan.
Tvgii Qaranka Zimbabwe oo lala wareegay iyo Militari ku wareegsan caasimadda